Faqiirkii lo’da digada ka guri jiray ee sahanka u tagay dayaxa - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Pallava Bagla/Getty
Image caption Dr Annadurai oo hor taagan dayax gacmeedka Chandrayaan-1
"Waxaan ahaa qof guri jiray digada lo'da ka hor inta aan waxbarshada bilaabin balse waxaan u adkeysan waayay urka kasoo bixi jiray digada" ayuu yiri Dr Mylswamy Annadurai
Dr Mylswamy Annadurai markii uu ahaa 8 sano jir, xitaa ma uusan heysan Kabo uu xirto, gurigii uu ku noolaana koronto la'aan ayuu ahaa.
Lahaanshaha sawirka Annadurai
Image caption Annadurai oo la sawirran ardeyda ay Iskuulka isla dhigan jireen
Lixdameeyadii, Mareykanka iyo Midowgii Soviet waxay ku taratamayeen sahanka dhanka cirka ama hawada.
Image caption Annadurai (dhexda), waxaa uu la taagan yahay walaalahiis
"Aabahay, waxa uu igu oran jiray sababta loo barto maaddada taariikhda ay tahay sidii dunida aad uga dhigi laheyd taarikhda" ayuu BBC-da u sheegay Annadurai.
Aabaha dhalay Annadurai waxaa uu ahaa macalin Iskuul, waxaa uu sidoo kale ahaa 'Dawaarle', howlahan si weyn ayuu ugu maareeyay nolosha qoyskiisa.
"Markii aan 12 sano jir ahaa, waxaan helay deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardeyda kasoo jeedo qoysaska saboolka ah" ayuu yiri Annadurai.
Qadar oo guul caro abuurtay ka gaartay Imaaraadka
Image caption Annadurai horraantii Siddeetamaadkii
Waxaa uu ku hadli jiray luqadda Tamil, waxaa ku adkeyd luqadaha Ingiriiska iyo Hindiga, waxaa uu yiri "Dadka waxay ku qosli jireen qaabka aan ugu hadli jiray luqadda Ingiriiska" ayuu yiri Annadurai.
Image caption Annadurai waxaa uu sheegay in barnaamijka sahanka hawada ay caawiyeen beeraleyda Hindiya
"Qorshaheenna waxaa uu yahay in aan sahan ku gaarno goobaha aanan horey loo gaarin, waxaan dooneynaa in aan soo ogaanno biyaha laga heli karo dayaxa iyo sida ay ku yimaadeen halkaasi" ayuu yiri.
Warbaahinta Hnidiya ayaa si weyn u hadal heysay guushaasi, balse dadka qaar ayaa dowladda ku eedeeyay in lacago badan loo adeegsaday tallaabadaas halka malaayin qof ay biyo la'aan yihiin.
Image caption Dayax gacmeedka
"In la gaaro dayaxa, Satarlaaytkeennu waxaa uu baahan yahay inuu ilbiriqsigiiba uu gaaro masaafo dhan 1 kiiloomiitar, si aan u gaarno Meeraha Mars waxaan u baanahay in ilbiriqsigiiba uu ku socdo 30 kiiloomiitar, waxaa loo baahan yahay qorshooyin wax ku ool ah iyo xisaab kulul" ayuu yiri Annadurai.
Daanyeer bas wada
Lahaanshaha sawirka RBI
Image caption Dayax gacmeed ku sawirran lacagta Hindiya
Caqabadaha jiri karo mustaqbalka
"Waxaan u baahan nahay in aan dadaal muujinno, waxaan ka shaqeyneynaa sidii aan u kobcin laheyn dayax gacmeedkeena" ayuu yiri
Image caption Hindiya oo ka shaqeyneysa horumarinta dayax gacmeed
Waxaa uu sidoo kale noqday qofkii saddexaad ee la siiyo 'shahaado sharaf' ee ka tirsan daowladda Hindiya.
Image caption Dr Annadurai oo dusha kala socda howsha dayax gacmeedka
Image caption Dr Annadurai oo la sawiran qoyskiisa
"Markii aan ka shaqeynayay fulinta mid kamid ah sahanka dayax gacmeedka, waxaan ku oran jiray saaxibadey in aan dhigi doono taariikh" ayuu yiri Annadurai.